Tag: horudhac ah | Martech Zone
Adobe XD: Naqshadeynta, Nooca, iyo La Wadaag Adobe Xalka UX / UI
Arbaco, Juun 18, 2018 Talaado, July 17, 2018 Douglas Karr
Maanta, waxaan rakibay Adobe XD, Adobe's UX / UI xalka loogu talagalay boggaga internetka, barnaamijyada websaydhka, iyo barnaamijyada moobiilka. Adobe XD wuxuu awood u siinayaa dadka isticmaala inay ka beddelaan xargaha silsiladaha ma guurtada ah una beddelaan noocyada is-dhexgalka ee hal guji. Waxaad ku sameyn kartaa isbedel qaabkaaga oo waxaad u arki kartaa cusbooneysiintaada noocooda si otomaatig ah - looma baahna in la iswaafajiyo. Waadna horay u sii eegaan kartaa noocyadaada, oo aad ku buuxineysaa ku-beddelashada qalabka iOS iyo Android, ka dibna la wadaag kooxdaada si aad uga hesho jawaab celin dhakhso leh. Astaamaha Adobe
Wednesday, July 18, 2018 Tuesday, July 17, 2018
Fikradda: Qaabilaadda, Wada shaqaynta iyo Hawsha Shaqo
Saturday, May 30, 2015 Arbacada, Juun 17, 2015 Douglas Karr
Dhawaan, waxaan helay emayl leh xiriiriye xagga sare ah oo sheegaya in dadka ay qorsheynayaan emayl cusub oo aan doonayo jawaab celintayada. Waxaan ku dhajiyay xiriirka oo waxay ahayd nooc guud oo la heli karo oo ah naqshad cusub oo email ah shirkaddu. Markii aan baaray bogga, waxaa jiray goobo kulkulul (goobo wareeg ah) oo la riixi karo isla markaana jawaab celin gaar ah ay bixiyeen dadka booqanaya bogga. Waan dhagsiiyey
Saturday, May 30, 2015 Wednesday, June 17, 2015
Dareeraha: Naqshadeynta, Tijaabi oo La Wadaag Noocyada Moobilkaaga
Jimco, Juun 27, 2014 Khamiis, Juun 26, 2014 Douglas Karr
Ma hubo in aan waligay tijaabiyay mishiin tijaabo ah oo ka fudud Fluid. Dhab ahaan, waa inaad siisaa tifaftirehooda darawal tijaabin ah, waa wax aad u fudud fudud, dareen leh oo leh sagxad adag oo jiidis ah iyo hoos udhaca qaybaha isdhaafsiga isticmaalaha ee ku soo dhacaya shabakadda iyo cabirka si caqli leh. Dheecaanku wuxuu leeyahay barnaamijyo ciyaartoy caadiya loogu talagalay Android, iPhone iyo iPad. Waxay kuu oggolaanayaan inaad dhisto noocyo shaashad badan oo isku xiran, dhoofinta qulqulka shaashadda, ku dar tilmaam iyo isbeddel ku xoqid, taabo,
Friday, June 27, 2014 Thursday, June 26, 2014
POP: Qalabkaaga moobilka ah ee loogu talagalay ku-sameynta warqadda
Sabti, Febraayo 8, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan tijaabiyey tan qalab kala duwan oo nooc ah si aan u abuuro siligyo iyo qaabab iskuxiraha isticmaalaha… laakiin marwalba waxaan dib ugu celiyaa warqadda. Waxaa laga yaabaa haddii aan soo iibsaday suuf sawir ah, nasiib ayaan yeelan karaa… Kaliya ma ihi nin jiir ah marka ay timaado sawir qaadista (weli). Gali POP, mobiil ama codsi kiniin ah oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu isku daro sawirrada noocyadaada warqadda ah iyo meelaha kulkulul ee isdhexgalka. Waa qurux xariifnimo! Ku billow sawir
Saturday, February 8, 2014 Sunday, October 4, 2015